Mathura Post – the Blog you want
पल शाहको काम पनि खोसियो, पलका ठाउँमा मुख्य भूमिकामा देखिने भए सौगात मल्ल कट्रिनाले शेयर गरिन् विवाह पछिको पहिलो होलीको तस्बिर होली खेल्दा खेल्दै काठमाडौँको घरबाट ख सिन् विनिता ‘पुष्पा’ सिक्वेलमा स्क्रिप्टमा परिवर्तनको तयारी प्रकाश सपुतको गीतमा प्रचण्डको आयो यस्तो प्रतिक्रिया, आफ्ना कार्यकर्तालाई गरे यस्तो अनुरोध
पल शाहको काम पनि खोसियो, पलका ठाउँमा मुख्य भूमिकामा देखिने भए सौगात मल्ल
कट्रिनाले शेयर गरिन् विवाह पछिको पहिलो होलीको तस्बिर
होली खेल्दा खेल्दै काठमाडौँको घरबाट ख सिन् विनिता
‘पुष्पा’ सिक्वेलमा स्क्रिप्टमा परिवर्तनको तयारी
प्रकाश सपुतको गीतमा प्रचण्डको आयो यस्तो प्रतिक्रिया, आफ्ना कार्यकर्तालाई गरे यस्तो अनुरोध
युट्युबमार्फत चरित्र हत्या गर्ने परियार र चिलुवाल पक्राउ
पल शाहका म्‍यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ
हिरासतमा रहेका पल शाहकी आमा बिरामी
एमालेमा प्रवेस गर्छु भन्दै बालकोट पुगेकी करिश्मालाई ओलीले यसो भनेछन्……
अभिनेता पल शाह प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण उनको फिल्म पनि खोसिएको छ । पल शाहलाई अनुबन्ध गरिएको फिल्ममा उनको स्थानमा अर्का अभिनेतालाइ भित्र्याइएको छ । फिल्म ‘२ नम्बरी’मा हिरो फेरिएका…
कट्रिना कैफले आज आफ्नो ससुरा घरमा पहिलो होली मनाइरहेकी छिन् । यो दिन उनको र उनका पति विक्की कौशलको लागि धेरै विशेष छ। यस्तो अवस्थामा कट्रिना र विक्कीले आफ्ना फ्यानहरूलाई…
बौद्धमा होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट ख’सेर एक जना किशोरी गम्भीर घाइते भएकी छन् । घरको दोस्रो तलाबाट ख’सेर सिन्धुपाल्चोककी विनिता चौलागाईं घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी…
अल्लू अर्जुन र रश्मिका मन्दाको सुपरहिट फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’को सफलतापछि निर्माताहरु यसको सिक्वेलको तयारीमा जुटेका छन् । फिल्मका निर्माताहरु स्क्रिप्टमा केही परिवर्तन गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । उनीहरुले उत्तर…
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रकाश सपुतकाे गीत ‘पीर’काे म्युजिक भिडियाेमा भइरहेकाे वि’वादबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । माओवादीका जनवर्गीय संगठनसँगै केही नेताहरुले सपुतकाे उक्त गीतकाे म्युजिक भिडियाे युट्युबबाट…
नायक इमरान हाश्मी र सन्नी लियोनीका एक मात्र छोरा बिहारमा पढ्दै
इमरान हाशमी एक यस्तो अभिनेता हुन् जसको छवि फरक छ । त्यस्तै सनी लियोनीलाई नचिन्ने त कुरै भएन । दुवैको एउटा बच्चा छ भन्दा तपाइँ लाई विश्वास नहुन सक्छ। बिहार…
पक्राउ परेका पलका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई पनि लाग्यो गम्भीर आरोप
कर णीको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाहका व्यवस्थापक कृष्ण जोशी पनि पक्राउ परेका छन् । उनलाई तनहुँ प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । जोशीलाई म’तिया’रको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले…
महानायक राजेश हमालको आफ्नै आवाजमा आयो गित ‘गाउँले ठिटो’ (भिडियो सहित)
कलाकार राजेश हमाल एक कुशल अभिनेता हुन् भन्ने सबैलाई जगजाहेर नै छ । हमालले अभिनय गरेका अधिकांश फिल्ममा उनलाई ग्रामीण परिवेशको पात्रको रुपमा दर्शकले हेर्दै आएका छन् । यिनै अभिनेता…
कस्ले दियो दिए चम्सुरीलाई मिर्गौला ?
कलाकार पल्पसा डंगोल ‘चम्सुरी’को सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा चिकित्सकले चार घण्टा लामो शल्यक्रियामार्फत उनलाई एउटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका हुन् । कलाकार डंगोललाई…
छोरा आरवले किन अक्षय कुमारलाई बाबु मान्दैनन् ? यस्तो छ कारण
अक्षय कुमार र ट्विंकल खन्नाका दुवै सन्तान लाइमलाइटमा बस्न चाहादैनन् । एकपटक अक्षयले भनेका थिए कि उनका छोरा आरवले आफू आफ्नो छोरा हो भनेर कसैलाई भनेनन् । अक्षयले यो कुरा…